Radio Hamrosansar | Nepali Internet Radio Station सूचना , साहित्य , समाचार र मनोरञ्जनको संवाहक
२0७४ श्रावण ९ सोमबार | ०६:१९:२७ Toggle navigation home
प्रवासबाटै संगितमा निशानेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुतलोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थहारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामायसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरुगायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छुदसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनेसेनामा नयाँ चलखेल News & Events
कांग्रेसको नेतृतवमा देउवा की निधि ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले घेरावन्दीमा पारेर कांग्रेसलाई रसातलमा फसाउने डिजाइन बनाएका छन् । लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल नेपाली कांग्रेसलाई विधि र बिधान भन्दा पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार निधिले चलाउन
काठमाण्डौ । बाग्लुङ जिल्ला ग्वालिचैरका स्थायी बासिन्दा बाबा कृष्ण तिवारी माता दुर्गा तिवारीको कोखबाट जन्मिएका रामु तिवारी जहाँ रहे पनि गायन क्षेत्र भुल्न सकेका छैनन् ।
'उपसभापति भारतले मानेन भन्न लाज लाग्दैन्' ? ,सभापति देउवाज्यू !
काठमाण्डौ । शिवपुरी जलाधार क्षेत्रका हर्ताकर्ता थिए– महेन्द्रका भ¥याङमुनीका छोरा, जो जेठो भएर पनि राजकाज पाएनन् र कलंकीमा राजमन्दिर बनाएर बसेका थिए ।
प्रवास भनेर काहाँ भो र ? गीत संगीत बिर्सन सकिदैन-सर्जक रत्न बुढा
काठमाण्डौ । सल्यान जिल्ला बाँमे वडा नं।३ नकाल गाउँमा जन्मिएका सर्जक रत्न बुढा प्रवासमै गीत संगीतमा जमेका छन् । प्रवास भनेर काहाँ भो र ? गीत संगीत बिर्सन सकिदैन ।
नेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'
पोखरा , मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली भातृसंगठन नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय महाधिवेशनको बन्द सत्रनै अन्योलमा परेको खबर छ । पोखरामा जारी चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज तेस्रो दिन हो ।
सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुत
काठमाडौं, २९ कात्तिक । सिटी एक्सप्रेस मनिट्रान्सफर भित्र निलम्बनमा परेका सरकारी कर्मचारीदेखि म्यानपावर संचालक सम्मको हालिमुहाली रहेको पाइएको छ ।
लोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थ
काठमाण्डौ । इच्छा, आकांक्षा, जोश, जागर भयो भने ठाउँले प्रभाव पार्दैन , जहाँ जुन ठाउँमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ । यही ठाउँ नै भन्ने हुँदैन ।
हारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामा
काठमाडौं । करिब १० वर्षको अन्तरालपछि पोखरामा हुन लागेको नेपाल तरुण दलको चौथो महाधिवेशन बिथोलिने सम्भावना देखिएको छ ।
यसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !
काठमाण्डौ । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले लाभकर ५४ अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार गर्न आग्रह गरेका छन् । पौडेलले भने एनसेलको सेवा बहिष्कार सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन् ।
सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरु
काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सवारी साधनहरुमा सुधारको सुरुवात भएको छ ।
राजश्वका डिजी चुडामणि शर्माको उत्पात कहिले सम्म हो ?
काठमाडौं । शक्तीको आडमा करोडौं कमाउने लोकमानसिंह कार्की जस्तै अर्को नाम हो चुडामणि शर्मा ।
गायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छु
काठमाण्डौ । सिराहा जिल्लाबासी गायक एबं मोडल बिशु मण्डलले थाहैनपाई सजाए छु बोलको भिडियो बजारमा ल्याएका छन् ।
दसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिने अभियानमा जुट्नुभएको छ ।
123456... Next Last featured video